Amabhulukwe efrijini → Izingubo zesitolo esibandayo • Imifekethiso yekhompyutha ye-P & M
Ibhulukwe lefriji lemisebenzi ekhethekile
Ifriji nezimpahla zokugqoka ezibandayo ezinikezwa esitolo pm.com.pl ukukhetha okubanzi kwezingubo ezilungele izimo ezinzima. Ukuhlanganiswa okuqinisekisiwe okwenziwe ngezinto ezinhle kakhulu kwenza ukusebenza emazingeni okushisa aphansi kuphephe futhi kunethezeke nsuku zonke. Ibhulukwe isiqandisi kungenye yezakhi zezingubo ezikhethekile zokusebenza ezimeni zokusebenza ezinzima.
Eduze kwamabhantshi futhi amabhuzu esitolo abandayo yingxenye ebaluleke kakhulu yemishini yomsebenzi. Ekhasini lethu lesitolo, izingubo zokugqoka ezibandayo zihlelwe ngokucophelela ukuze kuseshwe ngokushesha futhi kube lula.
Ama-dungaree afakwe imishini evikelekile emakhazeni aze afike ku -45 ° C
Ibhulukwe lamahhala ayatholakala ngosayizi kusuka ku-S kuye ku-3XL, futhi amamodeli awo wendawo yonke alungele abesifazane nabesilisa. Ama-dungaree ayingubo yokuzikhethela yokugcina umzimba ufudumele ngenkathi uvumela inkululeko yokuhamba.
Umkhiqizi unikele ngemibala ehlukahlukene (isb. I-navy blue, green, blue) namamodeli anamaphethini amancane ngendlela yemivimbo enemibala. Intengo yokuncintisana yisisombululo esifanele sabantu abafuna izixazululo zokonga, futhi lapho uthenga inani elikhulu, kunethuba lokunikeza isaphulelo esingeziwe.
IHi-Glo 25 amabhulukwe e-Coldstore, ukuvikelwa kwehle kuye ku -64 ° C
Amabhulukwe esitolo esibandayo - ukukhetha okuphephile
Amabhulukwe amakamelo abandayo namakhaza zenziwe ngezinto ezikhethwe ngokufanelekile njengokotini noma i-polyester, ukuvikela emakhazeni kuze kufike ku -64 degrees C. Amamodeli anikezelwayo anezinkinobho ezikahle, amaphakethe, kanye nezilengisi eziguquguqukayo zokunethezeka okukhulu. Amabhulukwe anezitifiketi zokuvumelana okuqinisekisa ukujwayela kwawo ukusebenza emazingeni okushisa aphansi.
Ngokwengeziwe, uma ufuna ukwenza ngezifiso izingubo zakho, ungakwazi uku-oda kalula okunezinhlobonhlobo kusuka imifekethiso yekhompyutha noma ukuphrinta kwesikrini ngemidwebo yakho, igama lenkampani, igama noma isikhundla. Yisixazululo esifanele labo abafuna ukwakha isithombe esihambisanayo senkampani.
Sine ipaki lomshini wakhoisivumela ukulawula ukumakwa kuzo zonke izigaba zephrojekthi futhi sisabele ngokushesha uma kwenzeka kukhona ukuguqulwa. Ithimba lethu elinolwazi lizosiza ekukhetheni imikhiqizo futhi lizohlinzeka ngokuhlolwa kokumakwa kwamahhala.
Ibhulukwe lesitolo esibandayo